Amafilimu ama-5 angenisa imali ephezulu kakhulu ka-2017 aqanjwa - Indlela yokuphila 2022
Amafilimu ama-5 angenisa imali ephezulu kakhulu ka-2017 aqanjwa
1. Ubuhle Nesilo
3. Ngiyadelela 3
4. Spiderman. Ukubuyela ekhaya
5. Amaqhawe Empisi 2
Imaphi amafilimu abe yimpumelelo ikakhulukazi ngo-2017 futhi aletha isamba sezigidi zamadola?
Impumelelo yezezimali yefilimu ayiqinisekisi ukulingisa okuhle kanye nombhalo othokozisayo wesithombe, kodwa kunalokho ikhombisa ulwazi oluhle lwabakhiqizi bezinto ezithandwa yizithameli. Kodwa phakathi kwalawa mafilimu angu-5 e-grossing ka-2017, kunezindaba ezithakazelisayo nezijabulisayo.
Amantombazane amaningi ebuntwaneni abuke ikhathuni ye-Disney ethi "Beauty and the Beast" futhi aphupha ngokuba sendaweni ka-Belle. Eminyakeni engu-26 kamuva, ifilimu yegama elifanayo yakhululwa no-Emma Watson noDan Stevens, owaba umholi webhokisi lebhokisi kulo nyaka. "Ubuhle Nesilwane" kuqoqwe u-$ 1.264 billion.
2.Uyashesha futhi Uthukuthele 8
Enye ifilimu "kusukela esikhathini esidlule": ingxenye yokuqala yefilimu ethi "Fast and the Furious" yakhululwa ngo-2001 futhi yenza imali eyizigidi ezingu-207. Ngo-2017, uVin Diesel, uMichelle Rodriguez noDwayne Johnson bakhuphule amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.63. Ake sibone ukuthi ihhovisi lebhokisi lizoba yini engxenyeni yesi-9 yefilimu, ezophuma ngo-2019.
Ingxenye yesithathu yekhathuni ethi "Ugly Me 3." Engxenyeni yesithathu, lowo owayeyisigebenga u-Drew unewele eliyimfihlakalo elingacekela phansi injabulo yakhe. Le filimu ingenise ngaphezudlwana kwesigidigidi samadola ehhovisi lebhokisi.
U-Spider-Man uTom Holland omusha, owathatha isikhundla sikaTobey Maguire, wathandana nabalandeli abaningi balesi sikhulu, ngoba ngo-2017 ingxenye elandelayo yefilimu yenza imali engu-$ 880,000 ebhokisini lebhokisi.
Ifilimu yaseShayina ekhuluma ngezigigaba zesosha u-Len Fen, okumele ahlenge abasebenzi bemishini yezokwelashwa kubadayisi bezikhali base-Afrika namavukela-mbuso, ukwazile ukuthola u-$870 wezigidi zokuqasha.
Ngaphezu kwalokho, i-Guardian of the Galaxy ithole amaRandi ayizigidi ezingu-863 ebhokisini lebhokisi, i-Thor $ 846 million, i-Wonder Woman yenza imali engu-$ 827 million, ingxenye elandelayo yefilimu yamaPirates of the Caribbean $ 794 million, Wars: The Last Jedi "- $ 791 million.